Boris sy ny Dark Survival dia traikefa mahatsiravina tokana | Androidsis
Boris sy ny Dark Survival dia lalao premium ny fampihorohoroana ananantsika ao amin'ny Play Store amin'ny vidiny 0,79 euro ary hitondra antsika amin'ny fiainana an-tsokosoko amin'ny fiainana an-tany miaraka amin'ny nuansa sy fiaviana manokana.
Ny manaitra koa dia azy ny fomba fijerinao manokana miaraka amin'io monochrome io sy ny tontolo «voasintona» sasany manolo-tena hamorona fihenjanana ilaina rehefa mandinika ireo tranga samihafa isika. Lalao voalamina tsara izay handaniantsika fotoana henjana noho io feo manodidina io miaraka amina fotoana mangatsiaka.
1 Ny fihenjanana sy ny fampihorohoroana amin'ny fahanginana
2 Fahano i Boris the Wolf isaky ny afaka ianao
3 Jereo ny tarehin-tsoratra rehetra ao amin'ny Boris sy ny Dark Survival
Ny fihenjanana sy ny fampihorohoroana amin'ny fahanginana
Handeha isika milalao toa an'i Boris the Wolf ary mizaha ny efitranon'ny studio fampandehanana Bendy mba hahitana izay ilainay amin'ny maha-mahery anay azy. Ny olana dia ny fananantsika ny demonia Ink mivezivezy manerana ny efitrano fa rehefa manakaiky antsika izy io dia hanafika antsika ka tsy maintsy manomboka indray isika.
Mba hisorohana an'izany dia manana zavatra maro azo atao isika. Amin'ny ambaratonga rehetra manana andiana kabinetra maromaro izahay ahafahantsika mametraka ny Boris the Wolf antsika ary amin'izany miandry ny demony hanaraka ny diany mba hiverina hizaha sy hahita ireo fitaovana rehetra ilaintsika ireo.
Mifehy an'i Boris izahay amin'ny tehina fanaraha-maso ary inona ny bokotra fihetsika azontsika ampiasaina rehefa mahita ireo fitaovana ilaina isika. Ankoatry ny fifehezana ny Boris dia mila manindry ihany koa isika amin'ny zavatra rehetra izay aseho amintsika. Izahay dia manomboka amin'ny zavamaneno ka hatramin'ny mpitam-boky izay hamerina hafatra tokony ho fantatsika.
Fahano i Boris the Wolf isaky ny afaka ianao
Ankoatr'ireo kabinetra ahafahantsika mametraka an'i Boris the Wolf dia afaka manao izany koa isika mampiasa milina fivarotana mba hanomezana sakafo ilay mpihetsiketsika malalantsika ary hiantohanay hiakatra foana ny heriny; dia ny bara eo ankavanan'ny efijery.
Sembana izany manana ny fikarohana nataontsika izahay dia anglisy, satria tsy amin'ny Espaniôla izy io ary ho sarotra amintsika ny manaraka ny kofehy amin'ireo audios ireo izay matetika manome famantarana vitsivitsy. Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatsika raha ho adika amin'ny teny Espaniôla izy io, ka amin'ity lafiny ity dia tsy manana zavatra hafa afa-tsy ny miaritra izany isika.
Boris sy ny Dark Survival dia mitondra antsika alohan'ny tantara iray izay tsy maintsy ahitantsika tsikelikely. Ary eto dia ampahany amin'ny misterin'ny fikarohana sy ny fahitana ireo zavatra ireo izay mamela antsika hanohy handroso. Misy koa ny ascenseur mamela antsika hihoatra ny haavony ary hamakivaky ny andro
Jereo ny tarehin-tsoratra rehetra ao amin'ny Boris sy ny Dark Survival
Misy andiana tarehin-tsoratra izay ho hitantsika. Tsy misy ihany ny demony amin'ny ranomainty, fa ny maro hafa izay ampahany amin'ny tantara izay hanana ora sy ora maro isika mandra-pahitany azy tanteraka. Ary koa ny piozila mamela antsika hiditra amin'ny zavatra manan-danja sasany.
Un kilalao premium izay tiana amin'ny fisehoan-javatra rehetra amin'ny tontolo iainana, ny endrika endrika, ny mozika manodidina misy ny feo sy ny sarimiaina izay manao ny zavatra ho eo alohan'ny traikefa tena izy. Manana fotoana feno loko maro be izy ary sisa tavela miaraka amin'ny antsipirian'ny efitrano izay mametraka an'io fihenjanana ilaina io hahitana ny zava-nitranga tao amin'ny studio fampandehanana.
Boris sy ny Dark Survival dia lalao premium izay latsaky ny iray euro Hanome anao tsy fahatokisan-tena mandritra ny ora sy ora maro, sary tsara ary fotoana mihenjana. Betsaka ny tsy ampoizina tsy tianay hambara, fa azo antoka fa hanome tahotra vitsivitsy anao izany. Tena tianay koa ny kalitaon'ny feo manodidina ary mamoaka fotoana manelingelina be izy io. Inona no holazaina fa tsy maintsy manandrana azy amin'ny headphones ianao. Raha mila fampihorohoroana bebe kokoa ianao dia tandremo ity psikolojia ity kokoa antsoina hoe Detention na multiplayer iray gore iray: Maty tamin'ny Deadlight.
Traikefa tsy manam-paharoa sy mavitrika izay tokony hahitantsika izay mitranga amin'i Boris ilay amboadia.
Miavaka amin'ny fahitana
Ity tononkalo miloko ity
Niforona ny atmosfera
Tsara ny feo manodidina
Boris sy ny Survival maizina
Developer: Joey dia nanao sary
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Mandria eo alohan'ny devon'ny Ink ao amin'ny Boris lehibe ary ny Survival maizina